Ungawana sei vhiza kuMexico kune maItaly? Nhungamiro ipfupi - ALinks
Iwe wafunga kushanyira imwe yeakanakisa nyika mupasi, Mexico! Iwe unenge wakazvibvunza zvakanaka kuti ndeapi magwaro auchazoda: sezvazvinowanzoitika, kune nyika dziri kunze kweEuropean Union, chitupa hachikwani.
Ini ndinoda vhiza yekuenda kuMexico?
Aihwa, MaItaly havadi vhiza yekuenda kuMexico, zvinopesana nezvaungafunge. Iwe haudi vhiza yakakodzera kuti upinde muMexico nepasipoti yeItaly. Asi iwe unozoda Kadhi Yevashanyi kana Fomu Yakawanda Yekufambisa (FMM) kana, muchiSpanish, 'Forma Migratoria Múltiple'.
Kadhi Yevashanyi fomu iyo iwe yaunogona kuzadza kuairport paunosvika kuMexico. MaTaliyane anogona kuenda kuMexico asina vhiza uye kugara kusvika mazuva zana nemakumi masere.
Iwe unogona zvakare kunyorera yeVashanyi Kadhi usati wafamba wega pano pawebsite yeHurumende yeMexico, asi kana iwe uchida rumwe rubatsiro uye uine chokwadi chekuti une zvese zvaunoda iwe unogona kuenda kuburikidza neyakavimbika vhiza sevhisi, senge iVisa, iyo inouya neItari zvakare.
Parizvino, Kubvumbi 2021, iwe uchiri kuda kuzadza fomu yehutano usati wasvika kuti upinde muMexico, fomu iri remubvunzo wekuziva nezve njodzi kune vafambi kana, muchiSpanish, 'Cuestonarion de identificacion de factores de riesgo en viajeros'.
Kune akanyanya kuvandudzwa mafambiro ekuenda kuMexico tarisa iyo IATA Yekufamba Center uye bata ndege yako usati waenda.
Italian haidi vhiza asi inoda kunyorera Kadhi Yevashanyi. Unogona kuzviita pano kana kana iwe uchida rubatsiro nekukurumidza uye wakasarudzika nekadhi rako revashanyi unogona kuenda kuburikidza neyakavimbika vhiza sevhisi, senge vhiza.
Verenga zvimwe uye shandisa paVisa
(zvakare muchiItaly kana uchida)
Chii chinonzi Multiple Immigration Fomu (FMM)?
Paunenge wasvika, uchafanirwa kuzadza fomu nevakuru vemunharaunda. fomu iri rinowanzo kuve remahara nekuti mutengo waro, 575 pesos yeMexico, waifanirwa kunge wakaverengerwa mutikiti rako rekubhururuka, unogona kutarisa nezvazvo kukambani yako yendege.
Mexico haisiriyo yega nyika inopa mhinduro yakanangana nendege kwete vhiza yechinyakare kuburikidza nemumiriri, Kuwait inopawo imwe nzira. Vanhu vazhinji havana kugadzikana vasina magwaro pavanenge vachifamba kana pfungwa yekuzokumbira kune imwe nyika. Naizvozvo pachinzvimbo chekukumbira Kadhi Yevashanyi kunhandare yendege paunosvika, mushure memaawa mazhinji ekufamba uye nemasutukesi ese, unogona kuzviita usati wanyatsobva kumba.
Iwe unogona kunyorera ye FMM Yevashanyi Kadhi pano pawebsite yeHurumende yeMexico, ino webhusaiti iri muchiSpanish, Chirungu, Chijapani, ChiChinese uye chiKorea, saka shandisa Google Dudziro kana uchida kuzviona mune mumwe mutauro.
Kukushandisa iwe unongoda chete:
email (ita shuwa kuti iri chokwadi sezvo ndipo panotumirwa gwaro kwauri),
tikiti yendege inosanganisira nhamba yekubhururuka) uye
imwe nzira yekubhadhara zvemagetsi kubhadhara sevhisi.
Iwe unogona zvakare kuita iyo Yekushanya Kadhi kuIVisa, verenga zvimwe
Yakawanda zvakadii Kadhi Yevashanyi kuMexico?
Kune mhando mbiri dzeKushanya Kadhi (FMM) zvichibva pakuuya nendege kana ivhu. Muchiitiko chekutanga, hapana chauchabhadhara kuitira sevhisi nekuti mutengo unowanikwa mutikiti yako yendege, mune yechipiri tichafanira kuwedzera 575 weights, inova makumi maviri nemana euros, kana 24 Chinese Yuan kana 188 US dollars.
Chekupedzisira, pane dzakasiyana nguva dzekugadzirisa dzinotangira pamaminetsi gumi neshanu kusvika kune yakanyanya zuva rimwe rekushanda Kana iwe uchida chimwe chinhu nekukurumidza tsvaga rubatsiro, muchiItaly, paIVisa.
Verenga zvakawanda uye shandisa paVisa, inowanikwa muItaly
Mexico ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi munyika. Vanhu, vanobva kumativi ese epasi, vanoshanyira mahombekombe ayo ane zuva kana nzvimbo dzayo dzekare dzenhoroondo. Zviitiko zvetsika, dhizaini, uye runako rwechisikigo zvinoita zvakanyanya kupfuura nzvimbo yekuenda.
Ivhavha iri pamusoro ndeye Ocean a Calle 14 2, Río Lagartos, Messico. Mufananidzo na Gabriele Francalanci on Unsplash.
Singapore visa yevaIndia
Ungaita sei kunyorera Thailand Visa?
Nyorera yeUS vhiza muSouth Korea
New Zealand vhiza yevaIndia